Mazana Akaburitswa Kubva Mukutsamwa Sardinia Masango eRoma sezvo Roma Inokumbira Rubatsiro rweEU
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mazana Akaburitswa Kubva Mukutsamwa Sardinia Masango eRoma sezvo Roma Inokumbira Rubatsiro rweEU
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mazana akabviswa kubva kumoto wemoto weSardinia apo Roma inokumbira rubatsiro rweEU
NeMuvhuro, moto wakatsva mukupera kwesvondo wanga uchiri kupisa pedyo nemataundi gumi nematanhatu eSardinian, kunyangwe paine kuyedza kweanosvika gumi nemana ndege dzinodzima moto nevashandi vemoto pasi.
Moto unopisa unoparadza Sardinia yeItaly.
Mazana evagari vemo uye vashanyi vakabviswa munjodzi iri kuuya.
Hurumende yeItaly inokumbira rubatsiro rweEU kurwisa moto weSardinia.
Anopfuura mahekita makumi maviri (mahekita zviuru zvishanu) emusango nepasi zvakaparadzwa pachitsuwa cheItaly che Sardinia semoto wemoto wakakura wakapfuura nemudunhu reMontiferru kumadokero kwechitsuwa. Kuputika uku kwakatambanudzirawo kumabvazuva kudunhu reOgliastra.
Mazana akabviswa kubva kune hasha dzemoto weSardinia apo Roma inokumbira rubatsiro rweEU
Gavhuna wedunhu iri, Christian Solinas, akaidana kuti "njodzi isina kumboitika" sezvaakaunza mamiriro echimbichimbi nemusi weSvondo.
Madziro emoto aifamba achitevedza materu emakomo muSardinia uye achivhara mune dzimwe nzvimbo dzekugara, semaputi eutsi hutema anobvisa matenga pamusoro. Inodzima moto ndege-mvura-bhomba iwo murazvo mamaira chete kubva kudzimba.
Mazana evagari vemo uye vashanyi vakabviswa pachiwi ichi sezvo zviremera zvakatsvaga kuvadzivirira kubva kunjodzi iri kuuya.
Sezvo vanodzima moto uye vekutanga vapindura vari kurwira kudzora inferno inotsamwa kwezuva rechitatu rakatwasuka, hurumende yeItaly muRome iri kukumbira European Union rubatsiro nenjodzi.
Hapana kufa kana kukuvara kwakataurwa kusvika parizvino asi mazana emakwai, mbudzi, mombe uye nguruve vakafa mumoto uyu sezvo vaive vakavharirwa mumatura mumapurazi ari munzira yemoto wemusango. NeMuvhuro, moto wakatsva mukupera kwesvondo wanga uchiri kupisa pedyo nemataundi gumi nematanhatu eSardinian, kunyangwe paine kuyedza kweanosvika gumi nemana ndege dzinodzima moto nevashandi vemoto pasi.
Kuedza kweve emergency emergency kukanganiswa nemhepo yakasimba uye inopisa ichiri kuvhuvhuta pachiwi. NeSvondo, Italy yakakumbira nyika dzeEuropean rubatsiro rwekugadzirisa moto uye kunyanya yakadana kwavari kuti vatumire hunyanzvi hwekudzimisa moto. Mukupindura, EU yakabvuma kutumira ina Canadair ndege kundobatsira Italy. Vaviri vavo vakapihwa neFrance uye vamwe vaviri neGirisi.
"Munguva dzino dzakaoma, tinomira pamwe chete," Mutungamiriri weGreek, Kyriakos Mitsotakis akadaro mune tweet neMuvhuro, paakazivisa danho iri.